Global Voices teny Malagasy » Japàna: Ho Averina Hatsangana Indray ny Teatra Kabuki · Global Voices teny Malagasy » Print
Japàna: Ho Averina Hatsangana Indray ny Teatra Kabuki
Voadika ny 25 Mey 2017 4:43 GMT 1	 · Mpanoratra Tomomi Sasaki Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aprily 2010)
Iray amin'ireo tranobe mora fantatra indrindra ao Japàna, ny Kabuki-za  lehibe sy tranainy ao Ginza izay nakatona ny volana Aprily 2010. Horavàna izy io ary ho lasa teatra sy toerana ahitàna birao maro samihafa misy fifandraisana mivantana amin'ny toerana fandraisana fiarandalamby ambanin'ny tany. Aza adino ny manapotsitra ity rohy  ity hahitànao ireo endrikendrika nomanina ho an'ny ivelany. Ity ny sary fahatelo ao amin'ilay pejy, tsy afaka ny handingana an'io ianao.
Kabuki-za rehefa alina, an'i Ali San
Tamin'ny 1889 ny Kabuki-za no nisokatra. Ny teatra amin'izao fotoana izao dia naorina tamin'ny 1951 taorian'ny fahamaizana nanjo ilay voalohany noho ny nataon'ny Tafika an'Habakabaka Amerikana nandritry ny Ady Lehibe Faharoa. 
Tany amin'ny 2005 tany ho any ny Shochiku Company, Limited , tompon'ny tany sady mpitantana ny teatra no nanomboka niresaka famerenana manorina azy io. Ny antony voalohany narosony dia tsy dia ampy fepetram-piarovana sahaza loatra ilay tranobe mba hanoherany ny loza voajanahary, indrindra fa ny horohorontany.
Ilay teatra, toerana koltoraly iray miavaka, dia voasokajy ho toy ny Fanànana Ara-Kolontsaina Azo Tsapain-Tànana.
kabukiza*Ilany Andrefana(3F) an'i tenugui
Nikarakara andianà “fampisehoana fanaovana veloma” ny Shochiku. Nilahatra hijery ny iray tamin'ireny i Yoko Ishikura ary manamarika hoe :
Tena nankafiziko tanteraka ny nijery ireo fampisehoana roa, ary tsy ahoako ny nijoro nandritry ny ora 3 sy sasany rehefa natambatra. Ireo hatsaràna sy ny taokanto tao dia tena nanainga fanahy ka nahatonga anao hisaintsaina hoe mendrika iainana tokoa ny fiainana.
Misy famantaranora manao dia miverina napetaka eo anoloan'ilay teatra, toerana nakàn'ny olona maro sary . Hoy i Yuzu :
Takatro fa ilaina ny mamerina manorina indray ilay teatra mba hiampita amin'ireo andian-taranaka hoavy ny Kabuki. Tsy andriko ny hahita ny fahavitany tanteraka!
Ity no fampisehoana farany ho hitako ato amin'ity Kabuki-za ity amin'izao endriny izao. Efa manisa mihemotra segondra iray hatrany ilay famantaranora, ary maro ireo olona naka sary teo anoloan'ilay tranobe sy ilay famantaranora. […] Ny fijerena ireo toko telo tamin'ilay “Aprily Fanaovana Veloma ny Kabuki-za” dia nahatonga ahy hahatsapa indray ny firavoravoan'ny Kabuki. Hikatona mandritry ny fotoana misimisy ny Kabuki-za, saingy mbola hitohy hijery Kabuki aho.
Hanao ahoana ny fahatsapantsika amin'ny 2013 rehefa vita tanteraka ny asa fanavoazana, ary hiandrandra hijery ny birao any amin'ny rihana fha-20 no mihoatra isika, izay hanjelanjelatra ery ambonin'ilay Kabuki-za malalantsika?
Ilay bilaogera, gohermes  dia mahatsiahy ny “Executive Centre Tokyo Bankers Club Building” (東京銀行協会ビル) tao amin'ny faritr'i Marunouchi. Indrisy fa nahazo anaram-bosotra hoe “taotrano hatina” io tranobe io (かさぶた建築) ary manontany tena i Kyo :
Ny “Executive Centre Tokyo Bankers Club Building”
Toa hoe olana ateraky ny rafitra no tsy maha-mety ny hanavaozana tanteraka io tranobe io. Tsaratsara kokoa ve ny mitahiry ilay tranobe amin'izao fomba izao? Sa metimety kokoa ny mamela azy….hirodana? Tsy dia tena azoko antoka.
Averina indray, ity ny rohy  misy ilay Kabuki-za vaovao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/25/100821/
 Tafika an'Habakabaka Amerikana nandritry ny Ady Lehibe Faharoa.: http://en.wikipedia.org/wiki/Bombing_of_Tokyo
 Shochiku Company, Limited: http://www.shochikufilms.com/
 manamarika hoe: http://www.yokoishikura.com/english/?p=1594
 nakàn'ny olona maro sary: http://yuzudiary2.exblog.jp/12538138/
 manontany tena i Kyo : http://glst.jugem.jp/?eid=693